Mpanamboatra sy mpamatsy modely Sce Transceiver | China SFP Transceiver Module Factory
Ny transceiver OPS551X83CDL40 10G SFP + dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW isaky ny 802.3ae, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 1.25Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. . Endri-javatra 1. 10Gb / s serial optic interface mifanaraka amin'ny 802.3ae 10GBASE-ER / EW 2. Fifandraisana elektrika mifanaraka amin'ny SFF-8431pitsipika fanatsarana ny 8.5 sy 10 Gigabit modely kely pluggable modely “SFP +” 3. 2-w ...
OPSP311X3CDL10 transceivers optique dia natao ho an'ny interface interface optique 10Gb / s ho an'ny fifandraisana data miaraka amin'ny fibres mode (SMF) tokana. Ny transceiver dia afaka manohana 9.953- 11.1Gb / s. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny datacom. Endri-javatra 1. Hot pluggable 2. 10Gb / s serial optic interface 3. Hatramin'ny 10km halavirana 4. Mifanaraka amin'ny SFP + MSA 5. SFP MSA fonosana miaraka amin'ny mpampitohy LC duplex 6. Digital Diagnostic Mo ...
OPSP311X3CDL10 transceivers optique dia natao ho an'ny interface interface optique 10Gb / s ho an'ny fifandraisana data miaraka amin'ny fibres mode (SMF) tokana. Ny transceiver dia afaka manohana 9.953- 11.1Gb / s. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny datacom. Endri-javatra ● Misy pluggable mafana ● 10Gb / s serial interface optika ● Halavirana 10km ● Mifanaraka amin'ny SFP + MSA ● fonosana SFP MSA miaraka amin'ny mpampitohy LC duplex ● Digital Diagnostic Monitor ...
OPSP551X3CDL80 10G SFP + transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW isaky ny 802.3ae, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 1.25Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. . Endri-javatra ● 10Gb / s serial optic interface mifanaraka amin'ny 802.3ae 10GBASE-ZR / ZW ● Fifandraisana elektrika mifanaraka amin'ny SFF-8431famaritana ho an'ny 8,5 sy 10 Gigabit modely kely azo ampidirina «SFP +» ● 2-tariby ...
10Gb / s SFP + BIDI Transceivers Optical OPSB321X3CDL10
OPSPB321X3CDL10 transceivers optique dia natao ho an'ny interface interface optique 10Gb / s ho an'ny fifandraisana data miaraka amin'ny fibres mode (SMF) tokana. Ny transceiver dia afaka manohana 9.953- 11.1Gb / s. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny datacom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● interfaceza optique 10Gb / s ● Hatrany amin'ny halavirana 80km ● Mifanaraka amin'ny SFP MSA ● Fonosana SFP MSA misy mpampitohy LC duplex ● Digital Diagnostic Monit ...
OPXP551X3CDL40 10G 1550nm XFP transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW isaky ny 802.3ae sy 10G SONET OC-192 / SDH STM-64, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 9.953Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. Ny diagnostika nomerika dia misy amin'ny alàlan'ny interface I2C araka izay voalaza ao amin'ny XFP MSA. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiharana datacom sy telecom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● Tohano 9.95Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s ny isany ● Bel ...
OPXP311X3CDL10 10G 1310nm XFP transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW isaky ny 802.3ae sy 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 9.953Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. Digital ny diagnostika dia misy amin'ny alàlan'ny interface I2C araka izay voalaza ao amin'ny XFP MSA. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiharana datacom sy telecom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● Tohano 9.95Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s ● Eo ambany ...
OPXP851X3CDLM 10G 850nm XFP transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-SR / SW isaky ny 802.3ae, ary afaka manohana ny taham-pahalalana manomboka amin'ny 9.953Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. MSA. Ny tetika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fahombiazana avo lenta sy lafo vidy mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiharana datacom sy telecom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● Tohano 9.95Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s isa ● Eo ambanin'ny fanjifana herinaratra 2.5W ● XFP MSA ...
OPXP551X3CDL80 10G 1550nm XFP transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW isaky ny 802.3ae sy 10G SONET OC-192 / SDH STM-64, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 9.953Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. Digital ny diagnostika dia misy amin'ny alàlan'ny interface I2C araka izay voalaza ao amin'ny XFP MSA. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiharana datacom sy telecom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● Tohano ny 9.95Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s ● Tokony ...
OPXPB321X3CDL10 10G XFP BIDI transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW isaky ny 802.3ae sy 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 9.953Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. Ny diagnostika nomerika dia misy amin'ny alàlan'ny interface I2C araka izay voalaza ao amin'ny XFP MSA. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiharana datacom sy telecom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● Tohano 9.95Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s ● Eo ambany ...
OPXPB231X3CDL10 10G XFP BIDI transceivers dia natao ho an'ny 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW isaky ny 802.3ae sy 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, ary afaka manohana ny taham-data manomboka amin'ny 9.953Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s. Digital ny diagnostika dia misy amin'ny alàlan'ny interface I2C araka izay voalaza ao amin'ny XFP MSA. Ireo volavolan-tsolika transceiver dia nohamarinina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy vidiny lafo mba hanomezana ny mpanjifa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fampiharana datacom sy telecom. Endri-javatra ● Azo ampidirina mafana ● Tohano 9.95Gb / s ka hatramin'ny 11.1Gb / s ● Eo ambany ...